Bathengi abathandekayo, ukusukela nge-11 kaFebruwari ukuya kwi-17 ka-Febhuwari, sizakubhiyozela uMnyhadala weNtwasahlobo ngeli xesha. Ukuhanjiswa kwengingqi kuya kuphinda kuqalise nge-16 kaFebruwari. Ukuhanjiswa kwamazwe aphesheya kuya kuqala kwakhona ngoFebruwari 18. Iqela lethu elinokusebenza liya kusebenza ngoFebhuwari 18 nayo. Ukuxhasa ukuhanjiswa okukhawulezayo kwe ...
IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing antibody Rapid Test iyafumaneka ngoku
ngomphathi ku 21-01-14
I-Immunobio iphumelele ngempumelelo I-COVID 19 yoThintelo loVavanyo olukhawulezayo lomzimba, kunye nekhithi yovavanyo esele ine-CE kunye neTshayina evunyiweyo. INGXELO: IMMUNOBIO SARS-CoV-2 engathathi cala kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (COVID-19 Ab) yenzelwe ukusetyenziswa ngobuchule kuphela. 2. Nawuphi na umhambisi kufuneka afumane ukuvunywa okufanelekileyo okanye ...
Uvavanyo lwe-COVID 19 lwe-Antigen olukhawulezileyo lubhaliswe ngempumelelo eJamani
I-Immunobio COVID 19 i-Antigen Rapid Test Kit ibhaliswe ngempumelelo eJamani. Iziphumo zovavanyo zobhaliso zibonisa ukuba iimveliso zethu zisebenza ngokugqwesileyo kwaye ziyaqwalaselwa kakhulu ngabathengi Esi sifo sitsha (i-COVID 2019) saqhambuka ngasekupheleni kuka-2019 saza satshayela i-China ekuqaleni kuka-2020.
I-CPHI kunye ne-P-MEC China 2020
I-HANGZHOU IMMUNO Biotech ithathe inxaxheba kumboniso we-CPHI kunye ne-P-MEC China 2020, ibonise iintlobo ezahlukeneyo ze-COVID 19 test kit kunye nezinye iimveliso kumboniso, abathengi beza emnqubeni ukuze babonisane nomjelo ongapheliyo kwaye bafikelela kwiinjongo zokusebenzisana nenani labathengi. Kwi ...